Dabka kaynta ayaa kordhi doona sanadaha soo socda | Saadaasha Shabakadda
Dabka kaynta ayaa sii kordhi doona sanadaha soo socda
Waa wax aad looga xumaado in la arko sida, daqiiqado gudahood, waxa qaatay sannado, badanaa qarniyo, si ay u soo noqdaan dambas. Dabka kaynta waa qeyb ka mid ah bii'adaha dabiiciga ah qaarkood. Xaqiiqdii, waxaa jira dhir badan oo soo bixi kara oo keliya dhacdada tan oo kale ah, sida kuwa ku dhaca hidde-wadaha Protea ee ku nool Afrika. Si kastaba ha noqotee, inta badan waxaa sababa aadanaha, haddana waxaa sidoo kale keena isbeddelka cimilada.
Mustaqbalka kaymaha waxaa loo soo bandhigayaa "madow", oo weligiis sifiican looma oran: yareynta roobka iyo xoojinta abaaraha waxay sababi doonaan dhirta inay si dhaqso leh u wiiqmaan muddada wareegga dabku wuxuu noqon doonaa halyeeyada maalinteenna maanta.
Dabku waa, xoolaha (oo ay ku jiraan dadka), dhibaato aad u daran. Hanjabaad aysan rabin inay yeeshaan. Dabku wuxuu baabi'iyaa wax kasta oo jidkiisa ah, wuxuu baabi'iyaa hoyga boqolaal nooc wuxuuna khatar geliyaa nolosha dadka taasi waa aagga. In kasta oo wax walba jiraan, maanta, waan ka fog nahay inaan helno tirada dabku inay hoos u dhacdo.
Heerkulka celceliska adduunka ayaa sii kordhaya. Waxyaabaha nool waa inay la qabsadaan, laakiin ma sameyn doonaan habeen keliya. La qabsiga wuxuu qaadan karaa bilo iyo xitaa sanado, waana wakhtigaas laga yaabo inayan haysan.
Sidaa darteed, saynisyahanka José Antonio Vega Hidalgo, oo ku xiran Bulshada Isbaanishka ee Sayniska Deegaanka iyo Xarunta Cilmibaarista Kaymaha ee Lourizán, dijo in waa lagama maarmaan in lagu sharaddeeyo waxbarashada, feejignaanta oo kordhay iyo gaar ahaan diidmada bulshada oo ah aalad aasaasi ah oo lagu dhaqmo. Sidoo kale, wuxuu intaas ku daray in xaaladda dhirta gubanaysa ay tahay in lagu hagaajiyo isku dhafka noocyada geedaha iyo xaddidaadda noocyada pyrophilic, kala duwanaanta isticmaalka kaynta iyo maalgashi ballaadhan oo cilmi-baaris ah.
Malaha taasi waa sida keymaha loo badbaadin lahaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Saadaalin » Dabka kaynta ayaa sii kordhi doona sanadaha soo socda
"Wax Ka Jira Halkaas" Waxaa lagu talinayaa Akhrinta Isbedelka Cimilada